DAAWO SAWIRRADA sida looga ciiday magaalada Jowhar – Radio Muqdisho
DAAWO SAWIRRADA sida looga ciiday magaalada Jowhar
Magaalada Jowhar waxa maanta Bulshada magaaladasi kula ciiday Wasiiro Dowladaha Maaliyada Soomaaliya iyo masuuliyiinta maamulka gobolka Shabeelaha dhexe.
Barxad ku taalo bartamaha magaalada ayaa mas’uuliyiinta kula dukadeen shacabka, waxaana dadkii ka qeyb galay salaadii ciida carafo ka mid ahaa duubabka dhaqanka iyo ergooyinka shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelah dhexe.
Imaam Maxamed Yuusf iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah duubabka dhaqanka ayaa ugu baaqay bulshada labada gobol Hiiraan iyo Shabeelah dhexe, inay ka shaqeeyaan midnimada iyo nabada umada SOomaaliyeed iyo gaar ahaan wadajirka labada gobol.
Guddoomiyha gobolka Shabeelaha dhexe Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe ayaa ugu hambalyeeyay bulshada gobolka Shabeelaha dhexe Ciida Carafo waxaana gudoomiyuhu uu ugu baaqay inay kala shaqeeyaan dadweynaha gobolka ciidanka amniga nabada isagoo u mahad celiyay ciidanka u taagan ilaalinta shacabka.
“Waxaan ku faraxsanahay in maanta aan ku ciidayno nabad ilaah aya mahad leh waxaan ugu hambaylyaynaya dadka gobolka Shabeelaha dhexe iyo guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed farxada ciida carafo” ayuu yiri Guddoomiye Guudlaawe.
Gudaha magaalada Jowhar ayaa lagu arkayay carruur faraxsan iyo dadweynaha magaalada isku marxabaynayay ciid wanaagsan
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Hoose oo hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed
Dhageyso Barnaamijka Hidaha iyo dhaqanka